Abesifazane ngokweqile ngokubukeka ekutadisheni izihloko ezihlobene ubuhle. Njengamanje, elisizungezile kukhona ukwaziswa okuningi kangaka ukuthi inhloko angaya emhlabeni. Akumangazi-ke ukuthi ngale ndlela ngempela amathiphu ezibalulekile kalula ulahleke. Folk ukuhlakanipha uthi ubuhle kudinga ukuzidela. Nokho, akekho uzovuma ukuletha ukuvela kwazo isisulu ngenxa zokungazi zokucathula. Ngokwesibonelo, wena qiniseka ukusebenzisa ilungelo bronzer? Uqinisekile ukuthi powder kuhle isikhumba sakho? Ungacabangi ukuthi abesifazane abasebancane kuphela ukwenza lezi amaphutha uma sisebenzisa izimonyo. Wena ngokwakho ningabenzela nsukuzonke, kodwa bahlale siqiniseka ngokugcwele ukuthi wenza into elungile. Hlola uhlu lwethu izinto 20, futhi ungakwenzi esikhathini esizayo.
Awunayo ukuhlanza makeup emabhulashini
Ngezikhathi ezithile sonke abesifazane lesi sono. Kungani ahlanzekile shayela i ukwakheka, lapho kungenzeka nivuthulule Rouge kanye powder wakhe izinhlayiya? Ngisho neningi abaculi ukwakheka ibhekelelwa yokuthi kuthatha isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, le nqubo kuyisinyathelo engathandwa zonke umsebenzi wabo. Kodwa ngisho noma ungashada asesabi ukusabalala kwamagciwane ebusweni, awukwazi ongaphika ukuthi ibhulashi ezingcolile kushintsha ithoni amathuluzi isicelo. Lapho bristles kuthiwa ogcwele kakhulu zombala, akekho kubo kuyokwehlela phezu kobuso bakho, ngendlela ofuna. Kuyefana nasendleleni applicators ngoba amathunzi. Imibala neze besazwana, kodwa umphumela uzohlupheka.
Uma ufuna ukubheka sengathi ebuyile eholidini, ungahlukumezi bronzer. izindawo Ukudalulwa ka lonke umzimba, ikakhulukazi entanyeni nasezandleni, uzonikezwa nge giblets. Kunalokho, zisebenzisa ubudala efakazelwe spray ukushuka. Kuphela kancane, sisebenzise bronzer anombala ocwazimulayo emakhaleni, izihlathi, kwesilevu nebunzi. Ngakho ungakwazi belingisa tan yangempela.
Awubonisi ukuhlola ithoni ngaphambi kokuthenga
Okulandelayo ubuhle-iphutha futhi ujwayelene isigamu ezinhle abesifazane. Uthenga concealer, kodwa ukhohlwe ukusebenzisa umhloli. Futhi kungani kufanele uhlole leli thuluzi isandla uma uzigqoka kanje ngobuso bakho? Lena amazwi okunengqondo, ucabangela ukuthi umbala kwesikhumba ezandleni ebusweni kungahluka ngenxa ukuchayeka engalingani elangeni. Kodwa ukuhlola isisekelo, kubalulekile zonke. Ukuze uthole umaqondana, zama ukubeka umhloli phezu ephansi emhlathini umugqa.
Uyazi isikhathi eside, kungcono embi. Kodwa lala, abazigezi ukwakheka emva emcimbini enomsindo. Futhi umkhakha ubuhle kudala owasungula le usula ezimanzi. Nokho, le ndlela ngesihluku akususi zonke ukwakheka kanye uvuseleleke wena. Uma uvumele ukuyolala fuduka phezulu, you azi ukuthi izimonyo ebusuku engena ku izimbobo zesikhumba futhi isikhumba elula. A ikhule ezimbotsheni lakhulisiwe ziwuphawu ukuguga ukubukeka. Uma wazi ukuthi kuphela ubuso esihlanzekile ngaphambi embhedeni kungaba ukunweba ubusha kanye nempilo yesikhumba, ubungeke abaye bahlanza njalo, naphezu ukukhathala zasendle.
Isicelo esingalungile ye-ejenti ukumaska
Wena ungacabanga ukuthi kunengqondo umane ukusebenzisa concealer phezu tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo, kodwa uzobheka nemvelo. Kunalokho, uchitha umugqa ngaphansi iso endaweni calantsatfu futhi ubuyisele. Ngakho, umphumela jikelele kudalwa siphungule.
Ukusebenzisa lip nentaba
Uma Usese zezinkulumo lip nentaba usebenzisa ipensela, wena ngendlela engenathemba bevaleleke esiminyaminyeni 90s. Ngisho noma isicelo lipstick phezulu, phezu sikhathi kuyothiwa amuncwa umzimba, kodwa uhlale kuphela indandatho ezigqamile esithombeni izindebe. Kuphakathi ukulahla indlela contouring ngokuphelele, noma ukuphanga, okungenani isigamu sezindebe.
Mascara Manzi nsukuzonke
Kungani usebenzisa Mascara waterproof nsuku zonke, uma engeyena umthandi ngikhale ukuze ngixole noma cha ekwenzeni ukubhukuda ezivumelanisiwe? Ukwakheka kwalo kakhulu zome nemivimbo engu, abenze mncane futhi ziyaqothuka. Nokho, kusukela ngo-kunzima ukususa Mascara manzi, kanti namanje ulahlekelwe ingxenye ezinye cilia.
Awunayo ukusebenzisa isizinda ngaphansi nail sula
Ingabe namanje uzibuze ukuthi kungani manicure, eklanyelwe ekhaya, hhayi uhlale ku izipikili izinsuku ezingaphezu kwezintathu? Vele wena miss isicelo base ungqimba. Lesi sakhiwo ihlinzeka eqinile isango ebusweni sula kanye ukuvenisha.
Ukusebenzisa okungalungile ifomula Rouge
Futhi, ungamangali uma othi awube yakho ibukeka nemvelo. Cabanga-ke indlela isikhathi ukushintsha ifomula. Uma usebenzisa othi awube ezomile, iya woketshezi, okuphambene nalokho. Khumbula ukuthi bonke abantu besifazane babe ezahlukene isikhumba hlobo. Yini evumelana omunye engenzi ivumelane omunye.
Ufaka isicelo nohlaka kakhulu incazelo yamagama ngokushintshashintsha iphimbo
Yiqiniso, ukube isikhumba ephelele, ubungeke ngakho wathwalwa yizingelosi isicelo imibala. Nokho, umzamo ukufihla zonke nezinduna futhi maholoholo, udala umphumela buso. Kunalokho, sisebenzise concealer kuphela inkinga ezindaweni: T-zone, esikhumbeni azungeze ekhaleni futhi ngaphansi kwamehlo. Shiya izingxenye ezisele njengoba yayinjalo.
Ungasebenzisi primer ngaphansi eyeshadow ecwebezelayo
Uma uzonde lapho izingcezu izithunzi shiny sidilike phambi kwamehlo, wenza isicelo okungalungile. Le ncwadi uba isisekelo ukwakheka, kodwa kulokhu kuyosetshenziswa ukuze kunenze nisondelane izinhlayiya izimonyo umbala. Kunezinhlobo eziningana umkhiqizo, ungakhetha ijeli. Imfihlo ilula: phezu kwesembozo somphongolo embizeni Ukukhemezela a shades ambalwa iso amaconsi ke ubambe shadow iso, isithako yesithathu primer. Zonke uhlanganise ngokucophelela. Ukwakheka okuholela singasebenza Isivalo.
Awunayo silungise concealer
Uma ucabanga ungakwazi ukufihla amabala esikhumbeni nangaphansi-iso emibuthanweni ngokuthinta concealer, wena azilungile. Uma ebusweni futhi ngabe primer, kokubili imikhiqizo ngeke azixoshe nomunye, eneka inkinga ezindaweni. Ngakho qiniseka ukuthi ukukhiya isicelo usebenzisa concealer powder okuxekethile.
Wena ukoma nemivimbo engu ngemva kokufaka Mascara
Phambi kwethu kunethuba iphutha elingathí sina kakhulu. Ungalokothi nemivimbo engu zinyakaze ngemva kokufaka Mascara. Ngaphandle ukuthi ziyokonakalisa emsebenzini wakho onzima, kodwa futhi yini engozini yokulahlekelwa cilia ngemva ukusondelana esebenzisa.
isicelo olungalungile othi awube
Ukuze othi awube akazange abheke izindawo ezimbili omkhulu ukuthi zifana upopayi sika ukwakheka, smile lokuqala, bese hudula ibhulashi kanye izihlathi kuze emathempelini. Vele qiniseka ukuthi umbala walala ngokulinganayo.
Ungeza okuyiwa ukususwa ukuvenisha e ishubhu elidala kapende
Ucabanga ngobuchule nokulondoloza ukuphila ozithandayo nail sula yakho, kodwa ngempela kuphela adalule ukuzimonyonga yakho bafake okusheshayo. Amakhemikhali ezisetshenziswa ukususa, ukuchitha isakhiwo lacquer. Kunalokho, sebenzisa diluent.
Ingabe uzibheka njengomuntu pro ukuthi ungenza ukwakheka omkhulu ohlezi phezu onqenqemeni lombhede. Nokho, ukhona yini ilungelo ekufuneni kwakhe ukubonisa supernavyki. Zama ngaso sonke isikhathi ukusebenzisa izimonyo egumbini okwanele phambi kwesibuko bese sizibuza le enkulu. Khumbula ukuthi ukukhanyisa esikhaleni kufanele kube eduze uya khona. Uma uya ehhovisi ke azisebenzi ukwakheka endlini yangasese mnyama. Ngakho osebenza nabo nqunu iso kungabonisa ukubona wonke amaphutha isicelo.
isitoreji Too eside ukwakheka
Uma usasebenzisa iso shadow owawunika esikoleni esiphakeme, ungenayo i-esizwakalayo sokuziqhenya. Sekuyisikhathi abaphonse, kanye namanye amathuluzi ibophe esikhwameni sakho iminyaka engaphezu kwemibili.
umthunzi ekungeyona concealer
Kungase kubonakale sengathi kungcono ukusebenzisa umthunzi ukuxegiselwa ka concealer, kodwa empeleni wena kuphela bunakwe kakhulu yokuntuleka yayo. Zama concealer, iphimbo kanye isikhumba sakho yemvelo ngokuvumelanayo kuhlanganiswe.
Ukuqhubeka kwakho usebenzisa i-inki uhhafu ezingenalutho
Uma uqala zizifunele izindonga uhhafu ezingenalutho tube ibhulashi ngoyinki, emoyeni ingena ngaphakathi. Ngenxa yalokho, ifomula bome ngokushesha. Lokhu Iqhinga asilokothi sinikeze lokhu eyelashes aluhlaza obukhulu. Ngakho-ke uya esitolo ngoba inki entsha.
Usebenzisa okungalungile ukuthungwa primer
Ekukhetheni indlela ezokwenza ube isisekelo ukwakheka, kufanele aqondiswe uhlobo isikhumba sakho. Uma usebenzisa uhlelo lakwa-primer, amanzi-based, ukufunda izithako ngokucophelela. Gwema ukuxuba izingoma ezihlukahlukene, ngaphandle kwalokho, ngeke alwe indawo phansi kwelanga. Ngokwesibonelo, isisekelo amanzi-encibilikayo kufanele kube iyahambisana primer, amanzi-based. Ngohlelo kuya abicah primer thatha ezifanayo ukuthungwa isisekelo.
Remedy ngoba namaqhubu ebusweni bakho. Cream, buso, Scrubs: Ukubukeza Izibuyekezo engcono beauticians